News - ကျွန်ုပ်တို့သည် PCR စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်နေသည်။ ရလဒ်များသည်အခြားသူများထက်အဘယ်ကြောင့်အမြဲတမ်းပိုဆိုးရသနည်း
PCR စမ်းသပ်ချက်များကိုလည်းလုပ်နေသည်။ ရလဒ်များသည်အခြားသူများထက်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှ ပို၍ ဆိုးရွားသနည်း။
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်၊ အခြားသူများ၏ PCR ကိုကြည့်ပါ၊ amplification ထိရောက်မှုသည်မြင့်မားပြီး electrophoresis strip သည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာလုပ်ဆောင်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ပြဿနာ?
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ပြvariousနာအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ PCR စမ်းသပ်ချက်များတွင်နံရံတစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်တုံ့ပြန်မှုစနစ်အတွင်းရှိအချက်များအားမသိစိတ်အလွယ်တကူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်မှုများတွင်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရေးကြီးသောလွှမ်းမိုးမှုကိုလျစ်လျူရှုလေ့ရှိသည်။
သင်၏ PCR ရလဒ်သည်မှားသည်၊ တဖကျတှငျစားသုံးမှုမြား၏ micro ညစ်ညမ်းမှုသို့မဟုတ် inhibitors ၏နိဒါန်းစမ်းသပ်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, မသင့်လျော်သောရွေးချယ်ရေးကိုလည်းစမ်းသပ်ရလဒ်တွေကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။
ပြနာကနောက်တစ်ခုပါ။ PCR အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်မှုကိုပိုမိုချောမွေ့စေရန်မှန်ကန်သောအရာများကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။ အာရုံစိုက်ခံရဖို့ပြtheနာများဘာတွေလဲ? ဒီနေ့စိတ်မပူပါနဲ့I နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူပေါင်းစပ်, PCR စားသုံးသူရွေးချယ်ရေးဘုံပြproblemsနာများကိုခွဲထုတ်, သင်တို့ကိုငါကူညီရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Q1: ဘာကြောင့်များသောအားဖြင့် PCR ပစ္စည်းများကိုအများအားဖြင့် PP ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်တာလဲ။
Huida: များသောအားဖြင့် PCR ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသည်ဓါတ်ကူပစ္စည်းများသို့မဟုတ်နမူနာများနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့လေ့ရှိသောကြောင့်၊ polypropylene (PP) ပစ္စည်းများသည်ဇီဝဗေဒအရမစွမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဇီဝမော်လီကျူးများနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ° ကို C, လည်းအပူသံသရာကာလအတွင်းအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကိုဆီးတားနိုင်။ )
Q2: ကွဲပြားခြားနားသော PCR ပြွန် / ပြားများအကြားမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
HUIDA: ရွေးချယ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက် - တိကျသောစမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီမှန်ကန်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ PCR ပြွန်၏အရွယ်အစားအများစုသည် PCR တုံ့ပြန်မှု၏လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီနိုင်သည်။ ဒီအခြေခံအားဖြင့်, ပထမ ဦး ဆုံးအနိမ့်အသံအတိုးအကျယ်ပြွန်ကိုရှေးခယျြဖို့အကြံပြုသည်။ အနိမ့်အသံအတိုးအကျယ်တုံ့ပြန်မှုပြွန် / ပန်းကန်သေးငယ်တဲ့ overhead အာကာသရှိပြီးသောကြောင့်, အပူစီးကူးတိုးတက်နှင့်အငွေ့ပျံလျှော့ချ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်နမူနာများများလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်နမူနာအနည်းငယ်သာများခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ အလွန်အကျွံအပူစီးကူးမှု၊ ယိုဖိတ်မှုနှင့်ကူးလူးကူးစက်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သဖြင့်နမူနာအငွေ့ပြန်ခြင်းဆုံးရှုံးမှုကိုနည်းစေနိုင်သည်။
တစ်ခုတည်း / ပေါင်းစပ်ပြွန်: 0.5ml, 0.2ml, 0.15ml
96- ကောင်းစွာပန်းကန်: 0.2ml, 0.15ml
384- ကောင်းစွာပန်းကန်: 0.04ml
Q3: နမူနာပမာဏသေးငယ်တဲ့အခါငါပိုက်တစ်ခုတည်းဒါမှမဟုတ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပိုက်ကိုရွေးချယ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်တချို့ကဘာကြောင့်ပြားချပ်ချပ်အဖုံးများရှိပြီးအချို့မှာခုံးအဖုံးရှိသနည်း။
Huida: နမူနာပမာဏသေးငယ်တဲ့အခါမှာတစ်ခုတည်းသောပြွန် (သို့) ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပြွန်ကိုပိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ တုံ့ပြန်မှုပမာဏကြီးမားသည့်အခါသို့သော်တစ်ခုတည်းပြွန်ကြီးစိုးဖြစ်ပြီး, အသံအတိုးအကျယ် 0.5 mL ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ပြားချပ်ချပ်အဖုံးနှင့်ခုံးအဖုံးတစ်ခုစီသည်အားသာချက်ရှိသည်၊ အထူးသဖြင့်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
တစ်ခုတည်းပြွန်: 0.2ml နှင့် 0.5ml; ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နမူနာအရေအတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ချိတ်ဆက်နေသောပြွန် - ၀.၂ မီလီမီတာသို့မဟုတ် ၀.၁၅ မီလီမီတာသည်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ 8 သို့မဟုတ် 12 ပြွန်ဘုံဖြစ်ကြသည်။
ပြားချပ်ချပ်အဖုံး: qPCR အတွက်တိကျသောချောင်းအချက်ပြမှုပေးနိုင်သည်။ အမှတ်အသားများရေးရန်လွယ်ကူသည်။
ခုံးအဖုံး - ဖိအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောတုံ့ပြန်မှုပြွန်၏ပုံသဏ္reduceာန်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် PCR တူရိယာ၏အပူအဖုံးနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ချောင်းအချက်ပြမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပြီး qPCR စမ်းသပ်မှုတွင်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
Q4: အဘယ်ကြောင့်အချို့သော PCR ပြားများတွင်စကတ်များရှိပြီးအချို့မှာမပါသနည်း။
Huida: တကယ်တော့ PCR ပန်းကန်၏စကတ်သည်အလိုအလျောက်အသုံးချခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ ကိရိယာအတွက်တည်ငြိမ်သောပံ့ပိုးမှုနှင့်စက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိမှုအပြင် pipetting လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတည်ငြိမ်မှုပိုမိုမြင့်မားစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
PCR ပြားများကိုယေဘုယျအားဖြင့် hemline မဟုတ်သော half-hemline နှင့် full-hemline ခွဲခြားထားသည်။
မရှိရင် ပြား - PCR စက်များသို့မဟုတ် qPCR စက်အများစုအတွက်သင့်တော်သော်လည်းအလိုအလျောက်အသုံးချခြင်းအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ပိုက်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏တည်ငြိမ်မှုမှာမြင့်မားခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းကိုပန်းကန်များနှင့်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
ဝက်စကတ်အစွန်းပန်းကန် - တံဆိပ်သို့မဟုတ်ဘားကုဒ်နံပါတ်နှင့်အလိုအလျောက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေပြီးကောင်းမွန်သောပိုက်လိုင်းတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။
အပြည့်အဝစကတ်အစွန်းပန်းကန်: အလိုအလျောက်စမ်းသပ် application များအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်ကိုလည်းဘားကုဒ်၏တံဆိပ်နှင့်လျှောက်ထားရန်အဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောစက်မှုစွမ်းအားရှိပြီး bulge module PCR တူရိယာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊
Q5 :PCR သံမဏိပြားများအတွက်အဘယ်ကြောင့်ထောင့်များနှင့်တံဆိပ်များသည်တူညီမှုမရှိသနည်း။
Huida - ထောင့်ဖြတ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အမှတ်အသားပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ထောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း - PCR ပြား၏ထောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအနေအထားကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်လွယ်ကူသောတည်နေရာအတွက်သင့်တော်သောတူရိယာများ၏လိုအပ်ချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သတ်မှတ်ခြင်း - PCR ပြားများပေါ်တွင်အက္ခရာနံပါတ်များကိုအမှတ်အသားပြုခြင်းသည်တစ် ဦး ချင်းရေတွင်းနှင့်နမူနာတည်နေရာများကိုခွဲခြားသိမြင်စေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဖောင်းကြွအရောင်ဒီဂျစ်တယ်လိုဂိုသို့မဟုတ်ထွင်းလိုဂိုများအတွက်။ အချို့သောအလိုအလျောက်အသုံးပြုသော application များအတွက်ပုံနှိပ်ထားသောနှင့်အမှတ်အသားပြုထားသောတုံ့ပြန်မှုပြားများသည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုပိုကောင်းစေသည်။
Q6: အချို့သောပြားချပ်ချပ်များပြားနေစဉ်အချို့သော PCR ပြားများသည်အဘယ်ကြောင့်ခုံးသနည်း။ ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတာလဲ
Huida: အကောင်းဆုံးနှင့်ကိုက်ညီသည် အများသုံး PCR ပြားအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ပြားချပ်ချပ်ပေါက်အနားသတ်နှင့်မြင့်သောအပေါက်မာဂျင်များ။
မြင့်တက် orifice အနားနှင့်အတူတုံ့ပြန်မှုပြားအမြှေးပါးတံဆိပ်ခတ်လွယ်ကူချောမွေ့ခြင်းနှင့်နမူနာများအကြား Cross- ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပေးသည်။
Huida သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိပြီး PCR ထုတ်ကုန်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာထုတ်လုပ်ခြင်း။ ထုတ်ကုန်လိုင်းသည်ကြွယ်ဝပြီး PCR စမ်းသပ်အသုံးပြုမှုအများစုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ သင်၏စမ်းသပ် application များအတွက်မှန်ကန်သောထုတ်ကုန်များကိုလာရွေးချယ်ပါ။